15 मिनेटमा तपाईंको आत्मविश्वास कसरी सुधार गर्ने - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | जुलाई 20, 2018 | सकारात्मक सोच, लाइफ कोचिंगको बारेमा, हिप्नोथेरापी, NLP लेख, आत्म सुधार लेख |0|
यदि तपाईंसँग आत्मविश्वास सम्बन्धी समस्याहरू छन् भने, यो लेख पढ्दा तपाईंलाई 15 मिनेटमा कसरी तपाईंको आत्मविश्वास सुधार गर्ने देखाउन सक्छ।
म सामाजिक परिस्थितिहरूमा डराउँछु। यद्यपि मलाई चिनेका मानिसहरूले विश्वास गर्न सक्दैनन् किन कि म आफैंमा यत्ति धेरै शंका गर्थें कि शाब्दिक रूपमा आत्मविश्वास सिक्नुपर्दछ जबसम्म यो मेरो स्वाभाविक अंश नहोउन्। म तपाईलाई आरामदायी आशावादी आत्मविश्वास भन्न सक्छु, र अधिक मजाको पनि।
यहाँ म तिमीलाई ती कुराहरुको बारेमा भन्नेछु जसले मेरो विश्वासको स्तरमा सब भन्दा भिन्नता ल्यायो ...
केही व्यक्तिहरूमा स्वाभाविक रूपमा उच्च स्तरको आत्मविश्वास हुन्छ तर सबैजना बढि विश्वस्त हुन सिक्न सक्छन्
सर्वप्रथम, आत्मविश्वासको अर्थ के हो भन्नेबारे स्पष्ट विचार पाउनु महत्त्वपूर्ण छ, अन्यथा तपाईंले कहिले थाहा पाउनुहुने छैन कहिले पाउनुभयो! त्यसोभए, आत्मविश्वासको अर्थ हो:
1) शान्त रहँदै। जीवनको प्रत्येक अवस्थाको लागि तपाईंले भावनाहरूको उपयुक्त स्तरमा दौड्न आवश्यक छ। धेरै भावनात्मक 'चुहावट' अनुभव मा खराब गर्न सक्छन्। तपाईं परिस्थितिको एक ठूलो दायरा मा आराम गर्न को लागी जब तपाईं आत्मविश्वास को दिशा मा ठूलो कदमहरू बनाउनुहोस्।
2) राम्रो भइरहेको। आत्मविश्वास को दोस्रो भाग अनिश्चितता संग आराम गर्न सक्षम हुनु को बारे मा छ। परिस्थितिमा 'शान्त' हुनु भनेको साँच्चिकै चीजहरू कसरी बाहिर जान्छन् भनेर थाहा पाउँदा आराम नगरी हो। यदि तपाईं साँच्चिकै अनिश्चिततालाई सहनुहुन्छ भने, तपाईं धेरै धेरै गर्न सक्नुहुन्छ।
3) अरूले तपाईलाई के सोच्छन् भन्ने बारेमा धेरै चिन्तित हुनु हुँदैन। तपाइँ जान्नुहुन्छ जब तपाइँ त्यहाँ जानु भन्दा पहिले केहि स्थान कस्तो हुनेछ भनेर कल्पना गर्नुहुन्छ तर जब तपाइँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ तपाइँको कल्पनाको लागि बिभिन्न भिन्न छ? तपाईंको कल्पना कत्ति भरपर्दो छ! तपाईंको कल्पनालाई यत्ति धेरै भरोसा गर्न रोक्नुहोस्। मैले धेरै बेरदेखि अरूले मेरो बारेमा के सोचिरहेको छ भनेर सोच्न परेशान गर्न छोडेको छु किनकि म प्रायः गलत हुँदाहुँदैछु।
)) विशिष्ट हुनु - तपाईं विश्वास कहाँ चाहनुहुन्छ? 'आत्मविश्वास' अर्थहीन छ जब सम्म तपाईं यसलाई कुनै खास चीजमा बाँधिनुहुन्न। तपाईं पहिले नै विश्वस्त हुनुहुन्छ कि तपाईं यी शब्दहरू पढ्न सक्नुहुन्छ वा लाइट स्विच अफ र अफ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईलाई जतासुकै आत्मविश्वासको आवश्यकता पर्दैन। जीवनमा तपाईले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न तपाईले चाहानु भएको कुराको स्थापना गर्नुपर्दछ। तपाईं आफ्नो जीवनमा विश्वास कहाँ पाउन चाहनुहुन्छ? अब विशिष्ट अवस्थाको बारेमा सोच्नुहोस् र तिनीहरूलाई लेख्नुहोस्। तपाईं आफ्नो दिमागलाई आत्मविश्वासतिर पुर्‍याउन थाल्नुहुन्छ।
5) बुझ्दै कि तपाईं के अपेक्षा गर्नुहुन्छ जुन तपाईं प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईंको मस्तिष्क एक अ is्ग हो जुन दिशाको लागि काम गर्न स्पष्ट लक्ष्यहरू चाहिन्छ। जब एक कार्य तपाईको दिमागमा सेट गरिएको हुन्छ यसले कार्यको पूरा हुने बारे ल्याउन सबै कार्य गर्दछ। यदि तपाईंले कसैको नाम सम्झन कोशिस गर्नुभयो तर त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने, घण्टा पछि तपाईंले तिनीहरूको नाम तपाईंको टाउकोमा पपहरू पार्नुहुनेछ।
'सम्झन कोशिस गर्दै' अनुभवले तपाईको मस्तिष्कको भावी अवचेतन व्यवहारको लागि टास्क वा ब्लुप्रिन्ट सेट गर्‍यो जुन अन्ततः तपाईंको लागि नाम निर्माण गर्‍यो - जब तपाईं यसबारे सचेतपूर्वक सोच्नुहुन्नथ्यो। तपाईं अधिक प्राकृतिक विश्वास महसुस गर्न यो प्राकृतिक संयन्त्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाई आफ्नो अवचेतन दिमागका लागि सही कार्य सेट गर्न निश्चित गर्न, अर्को पोइन्ट महत्त्वपूर्ण छ।
)) नकारात्मक साथ तपाईको दिमागमा काम नगर्नुहोस्। यसको सट्टामा: 'मँ पछाडि लान चाहन्न' (जुन तपाईंको दिमागको लागि 'स्क्रू अप' को कार्य सेट गर्दछ), तपाईले चाहानु भएको कुराको खाका सेट गर्नुहोस्! तपाइँको दिमागले के गर्ने भनेर तिर कार्य गर्दैन तर के नगर्नु भनेर बताई गरेर। र प्रकृतिले तपाईंलाई एक अचम्मको प्राकृतिक उपकरण प्रदान गरेको छ सही कार्य ब्लुप्रिन्टहरूसँग सेट गर्नका लागि।
)) प्रकृतिको गोल-सेटर प्रयोग गर्नुहोस्: अब तपाईले बुझ्नु भएको छ कि तपाईको दिमागको लागि सही कार्य सेट गर्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ, तपाईले कसरी विश्वसनीपूर्वक यो गर्नुपर्दछ भनेर जान्नु आवश्यक छ। राम्रो सम्मोहन तपाईको कल्पनाशक्ति को उपयोगको माध्यम बाट तपाईको दिमागमा सही खाका 'प्रोग्राम' कडा हुन्छ। यदि तपाईं शfully्कास्पद सम्मोहित अवस्थामा रहँदा आत्मविश्वास र रमाईलो महसुस गर्ने कल्पना गर्नुहुन्छ भने तपाईंको बेहोश दिमागलाई अरू केही गर्न गाह्रो हुन्छ। विश्राम को लागि खाका तपाईको अवचेतन दिमागमा दृढतापूर्वक सेट गरिएको छ।
3 सरल रणनीतिहरू छिटो तपाईं आत्मविश्वास महसुस गराउनको लागि:
1) समय / स्थान / अवस्थाको बारेमा विशेष सोच्नुहोस् जुन तपाई आत्मविश्वास महसुस गर्न चाहानुहुन्छ। सम्झनुहोस् 'आत्मविश्वास' को मतलब केहि होइन जब सम्म तपाई यसलाई कुनै खास चीजमा संलग्न गर्नुहुन्न।
2) अहिले तपाईको दिमागमा शब्दहरूमा फोकस गर्नुहोस् जुन वर्णन गर्दछ कि तपाइँ कसरी त्यो समय र ठाउँमा हुन चाहनुहुन्छ। हुनसक्छ 'शान्त', 'आराम' वा 'केन्द्रित' जस्ता शब्दहरू। याद गर्नुहोस् तपाईको दिमागले स्पष्ट सकारात्मक निर्देशनहरूमा काम गर्दछ।
3) जब सम्म तपाईको आँखा बन्द गर्नुहोस् जबसम्म तपाई चाहानुहुन्छ र ती शब्दहरूले कस्तो महसुस गर्दछ सोच्नुहोस्। त्यसोभए, परिस्थितिको आफैं कल्पना गर्नुहोस् र यसलाई तपाईको दिमागमा पूर्वाभ्यास गर्नुहोस् आत्मविश्वास र आराम पाएको महसुस गर्नुहोस्। यस तरिका तपाईंले आफ्नो बेहोश दिमागका लागि सही खाका वा 'टास्क' सेट गर्नुभयो।
तपाईं यसलाई प्रायः दोहोर्‍याउन सक्नुहुन्छ यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउन र यसलाई तपाईंको जीवनको धेरै भन्दा धेरै क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यदि तपाईं एक सम्मोहन सीडी वा डाउनलोड सुन्नुभयो जसले फाईदालाई अझ शक्तिशाली बनाउन सक्दछ (तल मेरो प्रोफाइल हेर्नुहोस्)। त्यसोभए यदि तपाईलाई लाग्छ कि केहि आत्मविश्वासले तपाईलाई आशिष दिईन्छ केही व्यक्तिहरू भन्दा तपाईले सन्तुलन समाधान गर्न सुरु गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको दिमागलाई ठीक तरीकाले प्रयोग गरेर।
अधिक आत्मविश्वास कसरी सिक्ने भनेर मलाई वर्षौं लाग्यो - अब तपाईं समयको एक अंशमा यो गर्न सक्नुहुनेछ। भाग्यले साथ दिओस्!
अब तपाइँको आत्मविश्वास बढाउनुहोस् HypnosisDownloads.com मा
मार्क टायररेल द्वारा लेख Hypnosis Downloads.com।
अब जब तपाइँ आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न र तपाइँ बन्न चाहानुहुने व्यक्ति बन्न तयार हुनुहुन्छ, यो सधैं एक राम्रो विचार हो चीजहरू जुन तपाईं आफ्नो जीवनमा चाहनुहुन्न। ती नकारात्मक चीजहरूबाट छुटकारा पाउन तपाईंलाई यो कुरा निश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्दछ कि तपाईंलाई के चाहिएको छ थाहा छ।
पछिल्लोपिउने पानी - जीवनको अमृत
अर्कोतपाईंको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि तपाईंको आत्म-छवि बढावा